[Utshintsho lwenkqubo] iMigo no Mahou | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiwadi yeOta
Utshintsho lwenkquboUmlingo kaMigo
Indawo yokusebenzela yoMculo Festa <Ihlobo>	Utshintsho lwenkquboUmlingo kaMigo ~ Ukususela kwiminyaka eyi-0 ukuya kwabadala ~ Masifumane umhlaba omtsha ngomculo
Zisa ubomi obutsha kwabo balahliweyo kwaye uphinde ubenze umculo omnandi!
"Iworkshop yoMculo" eTokyo Bunka Kaikan yazalwa ngomnqweno wokuba "Ndifuna abantu abaninzi kangangoko ukuba bonwabele ubuhle bomculo ngokulula."Olu cweyo lokufundela, nolunokuthatyathwa yinxaxheba ngabantwana nangabantu abadala, yinkqubo yemfundo yokuthabatha inxaxheba ekhuthaza ubuchule kunye nentsebenziswano ngomculo ngelixa ujongene nokonwaba komculo ogqitha iintlobo ezithile.
Ngenxa yokusasazeka kosulelo olutsha lwe-coronavirus, utyelelo lweCasa da Musica Workshop Leader's eJapan luye lwarhoxiswa.Ngesi sizathu, inkqubo "yeLion Beat" emiselwe umhla we-7 kaJulayi (Lwesine) iya kutshintshelwa ku- "Migo no Mahou", kwaye iNkokeli yeWorkshop yaseTokyo Bunka Kaikan iya kuvela.Nceda uqaphele ukuba akukho mbuyiselo eya kunikwa ngolu tshintsho.
NgoLwesine, Aprili 2021, 07
10: 30-11: 15 (10: 00-10: 30 ulwamkelo)
I-12: 00-12: 45 (11: 30-12: 00 ulwamkelo)
* Igumbi lokwamkela
Iholo encinci yeOta Ward Plaza
Izifundo / iiNdibano (Okunye)
ICasa da Musica iNkokeli yeWorkshop
I-Tokyo Bunka Kaikan Workshop iNkokeli
Umhla wokukhutshwa: nge-5 kaMeyi (ngoLwesithathu) ngo-12: 10 ~
* Umhla wokukhutshwa unokutshintsha ngokuxhomekeka kwimeko yosulelo lwe-coronavirus entsha.
Kwimeko yotshintsho, siya kukwazisa ngeTokyo Bunka Kaikan nakwiwebhusayithi yethu.
Ulwamkelo lokugcina ifowuni 03-3750-1555
I-Ota Citizen's Plaza, iAprico, iOta Bunkanomori, ifestile nganye / ulwamkelo ngefowuni luqala ngo-14: 00 kumhla wokuqala wokubhukisha.
I-Ota Citizen's Plaza (TEL: 03-3750-1611)
IOta Ward Hall Aplico (TEL: 03-5744-1600)
UDaejeon Bunkanomori (UMNXEBA: 03-3772-0700)
* Ukwamkelwa kunokwenzeka iminyaka eyi-0 kunye neenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu, kufuneka itikiti
* Nceda uthenge itikiti leqabane lakho (umfundi ofunda kwisikolo esiphakamileyo okanye ngaphezulu)
* Singakucela ukuba uqinisekise ubudala bomntwana wakho ngexesha lokuthenga okanye ngosuku lwentsebenzo.
② iinyanga ezingama-19-35
Malunga nabantu abangama-16 ngalo lonke ixesha
Umhlobo (umfundi ophakamileyo wesikolo esiphakamileyo nangaphezulu)
Ukuya kubantu aba-2 ngalo lonke ixesha
Inkonzo yeTikiti leZiko leNkcubeko iTokyo (TEL: 03-5685-0650)
Malunga nokuthatha inxaxheba kumasifundisane (nceda uqiniseke ngokufunda)
U-Oto Sakurai (i-Tokyo Bunka Kaikan Workshop Leader)
U-Eriko Tsukamoto (i-Tokyo Bunka Kaikan Workshop Leader)
U-Kana Hirayama (i-Tokyo Bunka Kaikan Workshop iNkokeli)
I-Tokyo Metropolitan Foundation yezeMbali neNkcubeko iZiko leNkcubeko laseTokyo / iBhunga lobuGcisa iTokyo
IYamaha Music Japan Co, Ltd.
IBhodi yeMfundo yewadi yeTaito
Iarhente yeMicimbi yeNkcubeko Inkxaso-mali yokuKhuthaza ubuGcisa kweNkcubeko
Indawo yokusebenzela yoMculo iFesta <ihlobo> ibanjwa ukusuka ngoLwesine, nge-7 kaJulayi ukuya ngeCawa, nge-15 kaJulayi.
Nceda ubone apha ngezantsi malunga neendibano zocweyo ezinxulumene noko.
Iworkshop yoMculo iFesta <Ihlobo> Ukuqeshwa kwabaThathi-nxaxheba